संक्रमणको दर अझै दुई महिना तीव्र हुन सक्ने
विराटनगर, १७ कात्तिक । आगामी दुई महिनासम्म भाइरसको संक्रमण तीव्ररुपमा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
केही समययता परीक्षण गराउनेमध्ये झन्डै २५ प्रतिशत मानिसमा संक्रमण पाइएपछि यो तथ्यांक अत्यन्तै डरलाग्दो संकेत रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । डा. पाण्डेका अनुसार दशैँका बेला भएका गतिविधिका कारण संक्रमणको विस्तार आगामी एकदेखि दुई महिनासम्म हुन सक्छ ।
दशैँतिहार तथा छठजस्ता चाडवाडमा यसपालि विगतका वर्षमा जस्तो धेरै आवतजावत नहुने ठानिएको थियो । तर, अत्यधिक संख्यामा सक्रिय संक्रमित भएको काठमाडौँ उपत्यकाबाट मानिस बाहिरिएपछि भाइरस अन्यत्र फैलिने चिन्ता बढेको हो । चाडबाडमा भएका आवतजावत र आउँदो जाडो मौसमका कारण मानिसले सजगता नअपनाए भाइरस झनै फैलिन सक्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीको अनुमान छ ।
रुघाखोकी लाग्ने समयमा भाइरसको संक्रमण जटिल चरणमा प्रवेश गरेकाले सबैजना सतर्क हुनुपर्ने बताउँछन् । जाडो महिनामा भाइरस थप सक्रिय हुनसक्ने बताउँदै घरभित्रै पनि सावधानीका साथ बस्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । नेपालमा सुरुसुरुमा झन्डै ९९ प्रतिशत संक्रमितमा लक्षण नदेखिए पनि अहिले भने विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितमध्ये २० देखि २५ प्रतिशतसम्ममा लक्षण देखिएको उनले बताए ।
जसकारण आगामी दिनमा गम्भीर लक्षण देखिएर सघन उपचारको खाँचो पर्ने संक्रमितको संख्या थप बढ्ने बताइएको छ ।